Mareero iyo Tahriibka Badda
Awowgay oo ka dhashay reer sabool ah, oo Halo toban ka yar iyo labo tiro oo adhi ahina xoolo u yihiin, arradan oo diihaalsan, ayaa waxaa habeen soo martiyey ninman dhankaas iyo xeeb ka yimid oo Qoryo(hub) soo iib keenay. Awowgay wuxuu la dhacay waraysigii aabbihii iyo nimankii martida ahaa iyo barwaaqada ay ka sheegayaan Xeeeb iyo Magaalo iyo weliba sida loogu dhoofo Tawaahi(Cadan).ee Yaman oo durba loo tanaado.
Awowgay wuxuu Aabbahii ka codsaday in uu nimankaa tolka ah xeeb iyo magaalo u raaco, wuuna ka yeelay sidaas ayuuna magaalo ku galay isagoo saddex neef oo adhi ah wata.
Wuxuu muddo ku dhex wareego tuulooyin xeebta teedsan sida Xiis,Maydh, Teed,Hago,Laasqoray, Maakhir,Durduri,Cadcaddo, Ceelaayo, Qaw,Bosaso, Mareero, Hantaara,Bacaad, Buurgaaban Buruc iwm. oo giddigood berigaas ahaa marsooyin yar yar ee doonyuhu ku soo xidhaan inkastoo maanta qaarkood baa'bay qana magaalooyin waaweyn noqadeen.
wuxuu Markii ugu dambaysay Doon ka raacay meel dadka degaankaasi u bixiyeen dakattu raxmaan.(Marsadii eebbe) ee ku taal Xeebata Mareero.
Markii uu isagoo dhowr iyo toban jir ah ka degay Tawaahi(Cadan) ayaa askarigii dekedda joogay oo dadka magacyada ka qorayey magaciisa carabi ku weydiiyey markaas illeen carabi ma uu aqoon eh wuxuu u maleeyey in la weydiiyey Doontu halka ay ka soo dhooftay markaas ayuu wuxuu yidhi "Mareero". kuwii la socday ayaa ku qosalay, askarigii magacyada qorayeyna Mareero ayuu u qoray. Maalintaas wixii ka dambeeyey """Mareero""" ayaa Naanays u ahayd dadkuna ugu yeedhi jireen.
Maalintaas ayaa saboolnimo ugu dambeysey Qoyskii Awowgay iyo wixii isaga ka sii tafiirmayba. Alxamdu lillaah. ""Mahadsanid Mareero""
100 Qof ayaa Ku Dhintay Doon Ku Degtey Badda Cas [March 31, 2004]
Doonta la raacayaa oo dabashaa wadda, Matoor iyo Jiheeye toonna ma laha, waxay kun jeer ka xuntahay kuwo ilaa maanta Mareero laga Raaco.
Hase yeeshee ruux kastaaba isagaa u badhedhaym dantiisana u socda. ilaahna talo saartay,ruuxna lama khasbin. weligeedna sidaas ayaa loo dhoofi jirey. naftan mar uun go'ina loo miidaamin jirey. haddii ay sidaas ku tagtana oo Doont badda gashana la arki jirey, haddii Alle badbaadiyona la arki jirey.
Haddaba maanta waxaa jirta in hawl laga dhigtay dad masaakiin ah oo nolol raadis doonayana in ay u tacabiraan berri carab iyo meeshii kaloo oo ay nolol ta ay ku haystaan dhulkooda raadinaya. dadkaasu ma aha kuwo dalkooda ka carararaya ee waa shaqo tag. intooda badanina waa dadka waddanka lagu dulmo waa kuwo Tigreeygu gumaadaan ee aanay nolol u oggolayn haddii ay xaggaa iyo deriskooda u soo cararaanna la yidhaahdo waa ONLF iyo waa argagixiso oo cadwogii ay ka soo carareereen dib loogu gacan geliyo. waa kuwa Xamar iyo agagaarkeeda looga yaqaanno beelaha aan hubaysnayn iyo looma ooyaanka waa kuwa Indha cadde iyo Cabdi-qaasim Beerahoodii iyo dhulkoodiiba kala wareegeen.
Dadkaas dhoof doonka ah ee Tahriibka (Baxsadka) loogu yeedhaa eed malaha oo waa nolol raadis. dadak Doonyaha ka kireeyaana eed malaha ee waa shaqadoodii oo waa wixii Doonta loo sameeyey in Badda lagaga tallaabo Cidda raacdana lacag laga qaado. Mareerna eed malaha oo waa marso ilaah u sameeyey in badda laga galo..
Adduunkoo dhan ayaa loo maraa nolol raadis, dadka maanta waddanku ku tiirsan yahay ee dadka inta badan masruufaa safarro kuwaaska daran bay soo mareer. kiinasdo gelid, baryo, been sheegid, baasoboor googoyn.suulio isku xidhid.iwm
Dawlad goboleedka Puntalnd waxaa u eg in aanay dadkaas awalba dhibaataysnaa sii dhibatayayn ee ay u fududeeyaan safarkooda. dadka dhibaatadooda ka faa'iidaystana ka qabtaan.
bal malee adigoo waadan u socda haddii kii aad taraansiitka ku ahayd dhexda kaa soo celyo lacagtii iyo Baasaboorkiina kaa qaado. sow Alle u baryi maysid in uu waddaankaa belo cirka kaga soo rido.
haddaba haddaynu reer Puntland nahay yaan cuquubo innaka raacin dadkaas dulman ee hawshooda ha loo fududeeyo.
Markaa yaan dheef iyo magac laga raadin miskiin dulman, haasaawe iyo wax Idaacaduhu ka hadlaanna laga dhigan.
waa Rido gar leh riyuhuna gar leh.